Posted by xol2 on June 3, 2010 · Leave a Comment Washington, (NNN)- Maxkamad ku taala dalka Maraykanka oo qaadaysay dacwad ka dhan ah Jen. Maxamed Cal Samatar, ayaa shaaca ka qaaday inaanu heli karin ogolaanshaha sharci jidaynaya inaan dacwad lagu oogin, ka dib markii hore loogu soo oogay jidh-dil, xasuuq iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqal iinsaanka, isla markaana waxay maxkamadda sare ee dalkaasi xukuntay shalay in maxkamad lagu taago dembiyaddaas.
Xaakim ka tirsan Maxkamadda Federaalka Maraykanka, ayaa hore meesha uga saaray kiiska ka dhanka ah Maxamed Cali Samatar, isla markaana sheegay inuu helayo hanaanka sharci ee dareelka diblomaasiyadeed. Hase yeeshee, Maxkamad Racfaanka ah ayaa dib u soo noolaysay kiiskaas oo sheegtay inaanu qaynuunkaasi daryeel u ogolaanayn shaqsiyaadka gaarka ah.Kiiskan oo la sheegay in si dhaw loola socday saamaynta siyaasadeed ee uu la iman karo, ayaa bixinta damaanad-qaaddis loo ogoladaa ay ka dhigan tahay in jidh-dilayaasha ajaanibka ah ee Maraykanka ku nooli ay ka baxsan karaan masuuliyaddahooda dembiyada ay galaan, sidaana waxa la sheegay inay soo qaddimeen kooxaha u ololeeya ururada xuquqal iinsaanku.
Filed under Bulshada, usa ← Daruuro ka samaysan ciidda duufaan ka dhacay lamadegaanka Gobi oo dul hoganaya tuulo ka tirsan Shiinaha